RW Rooble oo faray maamulka gobolka inuu degdeg wax uga qabto biyaha fadhiya waddooyinka caasimadda,+(SAWIRO)+(MUUQAAL). | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA RW Rooble oo faray maamulka gobolka inuu degdeg wax uga qabto biyaha...
RW Rooble oo faray maamulka gobolka inuu degdeg wax uga qabto biyaha fadhiya waddooyinka caasimadda,+(SAWIRO)+(MUUQAAL).
Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xafiiskiisa ugu yeeray guddoonka gobolka Banaadir ayaa faray in ay deg deg wax uga qabtaan biyaha roobabka ee xiray qaar ka mid ah jidadka muhiimka ah ee Caasimadda.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa tacsi u diray qoysaska 3 ruux oo ku geeriyooday roobabkii xoogganaa ee 24-kii saac ee la soo dhaafay ka da’ay magaalada Muqdisho, isagoo maamulka gobolka Banaadir faray in ay caawiyaan barakacayaasha iyo dadka danyarta ah ee roobabku waxyeelleeyeen.
“Waxaan isugu kiin yeeray dardar gelinta howlaha aad u haysaan shacabka oo maalmahan la dareemayo gaab muuqda oo ka jira dhanka bilicda iyo fayo dhowrka Caasimadda. Sidoo kale waxaa la idin ka sugayaa in aad gurmad deg deg ah la gaartaan dadkeenna ay waxyeeleeyeen Roobabka ka da’ay Gobolka.”
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa maamulka gobolka Banaadir ku boorriyay in dadka caasimadda la siiyo adeeg u dhigma canshuurta ay bixiyaan, isagoo yiri” Waxaan idinku boorrinayaa in dadka magaaladan jooga ee canshuurta bixiya ay dareemaan in canshuurtodii wax loogu qabtay”
Halkan ka DAAWO MUUQAALKA Warka.
Previous articleWaddada xariirisa Isgoosyada 4-Darjiino iyo Towfiiq oo dib u dhis lagu sameynayo+Sawirro
Next articleMusharixiinta Guddoonka Baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta khudbadahooda jeedinaya.